About Us - Ningbo Shenhe Ukunikeza Co., Ltd
Double Umugqa Deep Groove Ball Bearings
Self-bakubheka Ball Bearings
Double Umugqa Angular Imininingwane Ball Bearings
Amane Point Imininingwane Ball Bearings
Motorcycle Engine Amabombo
Steering Izithuthi Gear Bearings
Imshini yokugunda utshani Bearings
Okungenasimiso Ball Bearings
Glance ka SHB
Ningbo SHENHE UKUHLOMA CO., LTD, eyasungulwa ngo-1995, itholakala e Ningbo City, okuyinto ibhange eningizimu Hangzhou Bay Sea-ukweqa Ibhuloho. SHB kuyinto nomkhiqizi professional miniature kanye ezincane ngokunemba ezijulile inkatho ibhola, ibhola self-bakubheka nithela izithelo, ezine-iphuzu contact ibhola eziveza angajwayelekile ibhola esindayo.
Ngemva ukuthuthukiswa okusimeme engu-23, SHB ungumnikazi ifektri endaweni 40000 metres square nge super ukugaya umugqa ukukhiqizwa futhi inhlangano othomathikhi line production, kanye nezinye eziphambili ukucubungula nokuhlola imishini amayunithi ezingaphezu kuka-200, okuyinto constitude yokukala ngokuphelele, ukuhlaziywa futhi test system. Umthamo production uyakwazi okukhipha kwezigidi ezingu-50 amasethi miniature kanye ezincane ibhola amabombo. Imikhiqizo yethu singasetshenziswa nemoto, isithuthuthu engine, izinto zikagesi kanye ephezulu ebangeni ithuluzi kagesi. Ngaphezu kwalokho, ukukhiqizwa imoto esindayo uyawuthanda endaweni ekhethekile, umuntu ngokukhethekile-ababelwe umugqa production. Umkhiqizo has a izinga ozinzile futhi eliqinisekile lokuphila isikhathi eside, ngesivinini, futhi umthwalo phezulu, ngokuwina nokwethenjwa amakhasimende. Shenhe Amabombo ihlanganisa emakethe yasekhaya kanye nemakethe USA, Europe, Japan, Taiwan, eningizimu-mpumalanga ye-Asia nakwamanye amazwe kanye izifunda.
Inkampani osungulwe futhi iqalise ukuphathwa isakhiwo yesimanje, isicelo ukuphathwa uhlelo ebalulekile, le 5S ukuphathwa ensimini uhlelo, futhi Kanban isiko, ukulawula ukukhiqizwa eziveza yezimoto ne ISO / TS 16949: 2009 ukuphathwa izinga uhlelo, futhi sihlobene-non-yezimoto nge ISO9001: izinga 2008 ukuphathwa uhlelo
50th Xiantan Road Langxia Street Yuyao City Zhejiang Isifundazwe